Xildhibaano ku eedeeyay afhayeenka baarlamaanka federaalka in uu ka meermeerayo furitaanka fadhiga baarlamaanka. – Radio Daljir
Xildhibaano ku eedeeyay afhayeenka baarlamaanka federaalka in uu ka meermeerayo furitaanka fadhiga baarlamaanka.
Moqdisho, Nov, 30 ? Qaar kamida mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa afhayeenka baarlamaanka mudane Shariif Xassan Shiikh Aadan ku eedeeyay inuu si cad u diiday furitaanka fadhiga golaha baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaan C/qaadir Nuunow Faarax oo ka mida mudanayaasha baarlamaanka dalka Soomaaliya oo u waramay Daljir ayaa shaaca ka qaaday in arrintaan ay tahay sharci ahaan mid lagu haysto guddoomiyaha baarlamaanka Shariif Xassan, isla markaana uu meel kaga dhacay axdi qarameedkii u yaalay dawladda Soomaaliya.
Md. C/qaadir waxaa uu tusaale u soo qaatay guddi xildhibaano ah oo waqtiyo kale duwan talooyin ku aadan furitaan fadhiga baarlamaanka u soo jeediyay Shariif Xassan, balse uu ku tilmaamay mooshinada horyaala golaha baarlamaanka kuwo aan u bahanyn ansixin iyo dood-na, arrinaasina uu si uga biyo-diidsan-yahay.
Aragtida afhayeenka baarlamaanka Shariif Xassan Shiikh Aadan ee ku aadan diidi-taanka furida fadhiga golaha baarlamanka Soomaaliya ayaa u muuqata, mid ka dhabaynaysa musuq-maasuqii lagu eedayn-jiray madaxda ugu saraysa dawladda dhexe ee dalka.